Translate Myanmar (Burmese) to Turkish | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Turkish, Myanmar (Burmese) to Turkish translations, Myanmar (Burmese) to Turkish Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Merhaba nasılsın
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Kimse var mı?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Seni gerçekten çok seviyorum
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Bu hamburgerin fiyatı ne kadardır?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Bana taksi çağırır mısın?
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Ben ilgileniyorum
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Uçuşum ertelendi
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Iş için buradayım
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Merhaba benim adım
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Üzgünüm ama evlendim
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Ben size sormak istiyorum
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Beni havaalanına götürür müsünüz?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Şu an saat kaç, lütfen?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? En yakın polis karakolu nerede?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Telefon şarj aletini alabilir miyim lütfen?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Bana yardımcı olabilir misiniz?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Bana bir içki ısmarla, lütfen?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Fiyatı ne kadar?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Gluten için alerjim var
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Doktor çağırın
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Doktor var mı?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Görüşebilir miyim?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Patronun lütfen.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Burası çok güzel
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Beni otele götür lütfen
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Oda numaram ne